kuvhuraSUSE Leap 15.3: RC yakaburitswa kuyedzwa izvozvi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inotevera inoshanda sisitimu yenharaunda ino yekusimudzira ichave vhuraSUSE Leap 15.3, sezvo iwe ungatoziva kana iwe uri fan yeiyi yakasimba Linux kugovera. Zvakanaka, kana iwe uchida kuratidzwa kwekuti zvese zvichange zviri nhau uye uchida kuzviedza pakombuta yako (kunyange hazvo isingakurudzirwe kugadzirwa sezvo isiri iyo yekupedzisira vhezheni), kana mumushini chaiwo, unotova neRC (Regedza Musarudzo).
Iyi vhezheni itsva yave kuwanikwa ye vagadziri uye testers ndiani anoda kutanga kushandisa openSUSE Leap 15.3. Kana iwe uchifarira kuzviedza, iwe unogona dhawunirodha iyo ISO kubva kudivi iri. Ikoko iwe uchaiwana iyo kune akasiyana maumbirwo ayo ayo aripo uye mune ese ekumisikidza vhezheni (networked, offline, ...).
Kana iwe wanga usingazive iyi distro, iwe unofanirwa, nekuti ndeimwe yeakakura uye anozivikanwa, anoshandiswa nemamirioni evashandisi kutenderera pasirese, uye ine yakanangana nekuitiswa kwenzvimbo dzebhizinesi nemaseva. Uye zvakare, inozivikanwa kwazvo nekusimba kwayo, dombo chairo risingapi matambudziko maererano nekusimba, kunyanya iro vhezheni vhuraSUSE Leap, kubvira Tumbleweed Icho chichienderera mberi kuburitsa distro iyo yekuve neazvino, asi kwete seyakaomarara.
Zvakanaka izvozvi, vhuraSUSE Leal 15.3 yatove nemugove wekupedzisira wekuburitsa, pamwe nekuratidzwa kwe nhau iripo mune yekupedzisira vhezheni iyi. Kana zviri zvekuchinja, heino pfupiso nezvakakosha.
Linux kernel 5.3.18, yakafanana inoshandiswa ikozvino muSUSE Linux Enterprise 15 SP3. Rangarira kuti openSUSE Leap 15.3 ndeye bhanari inoenderana neSUSE Linux Enterprise 15 SP3.
Tsigira zvinowedzera zve s390x, PowerPC (PPC64LE), ARM 64 (AARCH64), uye x86-64 zvivakwa.
Iyo zvakare inosanganisira idzva vhezheni dzeinotsigirwa nharaunda nharaunda, senge KDE Plasma 5.18 LTS ine Mapuratifomu 5.76.0, GNOME 3.34 uye Xfce 4.16.
openSUSE Leap 15.3 zvakare inopa Wayland Sway munyori, izvo zvakanaka kana iwe uchida mataira ebhenefiti.
Akawanda emapakeji ehungwaru ekuwedzera akawedzerwa, senge Tensorflow, raibhurari yePyTorch, kana iyo ONNX fomati.
Iwe zvakare une GNU Hutano, QGIS, Prometheus, Grafana, nezvimwe, kune avo vakazvipira kune yehutano chikamu, research, nezvimwe.
Ikozvino inosanganisira LibreOffice 7.1.1 sehofisi suite.
Zvakare zvimwe zvinongedzo zvepakeji senge Thunderbird 78.7.1, Roundcube 1.3.15, Chrome 89, Firefox (ESR) 78.7.1, uye Python 3.6.12.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » kuvhuraSUSE Leap 15.3: RC yakaburitswa kuyedzwa izvozvi